Weerarrada xadgudubyada dhinaca internet-ka oo laga cabsi qabo - Radio Sweden Somali - Raadiyaha Iswiidhen | Sveriges Radio
Weerarrada xadgudubyada dhinaca internet-ka oo laga cabsi qabo
Publicerat fredag 17 februari 2017 kl 10.40
Sumadda hayadda ammaanka signaalada ee ciidanka qalabka sida. Foto: Christine Olsson/TT
Xadgudubyada xagga internet-ka ayaa la sheegay inay sii badanayaan, iyadoo xadgudubyadaasi ay ka imanayaan cid aan la aqoon.
Xadgudubyadan oo isugu jira noocyo kala duwan ayaa la sheegay inay iminka noqdeen kuwa iyagu aad u baahsan, iyagoo keena dhaawacyo khatar badan leh. Dag Hartelius oo ka tirsan ilaalada danbiyada noocan ah (försvarets Radioanstalt) ayaa sheegay inay dhacaan kumanaal danbi oo ahi bil walba, iyadoo la isticmaalayo kood ama fure sir ah kaasoo waxyeello weyn u geysan kara laamaha Hay'adaha dowladda
Hartelius ayaa intaas ku daray in xadgudubyadani ay yihiin kuwa mar walba taagan sidaas darteedna ay habboon tahay in laga foojignaado lalana socdo dhaqdhaqaaqooda. Xadgudubyadan ayaa kuwooda ugu badani yihiin qaar ay dowlado ka dambeeyaan si markaas loo jabsado xogo xasaasi ah ee laamaha dowladda, sida, difaaca, booliska, Farsamada wershedaha iyo ha'adaha horumarinta bulshada.
Hartelius ayaa sheegay in Hay a'addiisu ay isha ku hayn doonto laamha iyagu u nugul xadgudubyadan noocan ahsida isgaarsiinta tamarta iyo farsamada aaladha isgaarsiinta. Waxaxa kaloo uu Hartelius sheegay in dhaqdhaqaaqyadan ay ku jiri karaan qaar agagixiso iyo kuwa sirdoon ajnebi ah oo markaa isku dayaya inay xog helaan amaba ay bulshada waxyeelleeyaan, sidaas daraadeedna ay habboon tahay in laamaha ka hortagga danbiyada sida sirdoonka booliskaa iyo hay'adda sirdoonkuba ay feejignaadaan si looga hortago danbiyada noocan ah.